क्यानाडा बाट बेलायतको लागि कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
तपाईको क्यानेडाली गाडी युनाइटेड किंगडममा आयात गर्दै हुनुहुन्छ?
बेलायतमा सवारी साधनहरू आयात गर्दा हामी उद्योग विज्ञहरू हौं, त्यसैले यो प्रक्रिया एक्लै प्रयोग गर्नुको सट्टा हामी हाम्रो सेवाहरूको उपयोग गर्न सुझाव दिन्छौं तपाईंको जीवनलाई सजिलो बनाउनको लागि।
क्यानाडाबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी ढुवानी गर्दै
क्यानाडाबाट ढुवानी या त भ्याकूवर वा टोरन्टोबाट हुन्छ, र हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया स collection्कलन, इनल्यान्ड ट्रकिंग, शिपिंग, भन्सार, परीक्षण र रेजिष्ट्रेसनबाट व्यवस्थित गर्दछौं। हामीबाट कनाडाबाट युकेमा तपाईंको कार आयात गर्नका लागि अनुकूल र समावेशी उद्धरणको लागि एक उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस्।
सवारी को इनल्यान्ड ट्रकिंग
क्यानाडामा हाम्रा ठूला एजेन्टहरू छन् जसले तपाईंको गाडीलाई युकेमा निर्यात र ढुवानी गर्न सहयोग गर्दछन्, तपाईंको गाडी तपाईंको ठेगाना वा तपाईंले आवश्यक परेको खण्डबाट खरीद गरेको व्यक्तिको ठेगानाबाट तपाईंको स of्कलनको प्रबन्ध गर्नेछ।
हामी सबै आवश्यकताहरू र बजेटहरू पूरा गर्न संलग्न वा खुला यातायात सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। हामी पछाडि गाडी नजिकको बन्दरगाहमा सारियो।
सवारी लोड र शिपिंग
हाम्रो कार डिपोमा तपाईंको कारको आगमन पछि, हामी यसलाई अत्यन्त सावधानी र ध्यानको साथ यसको शिपिंग कन्टेनरमा लोड गर्नेछौं। क्यानाडामा भूमिमा रहेका हाम्रा एजेन्टहरू हड्पिक गरिएको छ किनभने उनीहरूको अनुभव र कारको विवरणका साथ विवरणमा ध्यान दिएर। उनीहरूले यो सुनिश्चित गर्नेछन् कि तपाईको गाडी कन्टेनरमा जोडिएको छ युकेमा यातायातका लागि तयार छ।
हामी समुद्री बीमा प्रदान गर्दछ जसले तपाईंको गाडीलाई ट्रान्जिटको बखत यसको पूर्ण प्रतिस्थापन मूल्यसम्म समेट्छ।
क्यानाडाबाट बेलायतमा कार आयात गर्दा, तपाईंले कम्तिमा free महिनासम्म गाडीको स्वामित्व पाउनुभएको हुनुपर्दछ र १२ महिना भन्दा बढी युरोपियन युनियन बाहिर बस्नुपर्‍यो भने तपाईं पूर्ण कर तिर्न सक्नुहुनेछ।
यदि यी मापदण्डहरू लागू भएन भने EU मा निर्मित सवारीहरू £ duty० कर्तव्य र २०% VAT को अधीनमा हुनेछन्, EU बाहिर निर्मितसँग १०% ड्यूटी र २०% आउँदा, तपाईंले गाडीको लागि भुक्तान गरेको रकमको आधारमा। भ्याट
Vehicles० बर्ष भन्दा बढी उमेर भएका धेरै सवारी साधनहरू%% आयात भ्याटको लागि योग्य हुन्छन् र आयात गरिंदा कुनै शुल्क हुँदैन, यदि उनीहरूको मूल प्रयोगबाट उल्लेखनीय रूपमा परिमार्जन गरिएको छैन र तपाईंको दैनिक ड्राइभरको उद्देश्यले गरिएको छैन भने।
बेलायत आइपुग्दा तपाईको गाडी धेरै परीक्षण र संशोधनको अधीनमा हुनेछ यो सुनिश्चित गर्न कि यो युके राजमार्ग मापदण्डमा पुग्छ।
परिमार्जनले मुख्यतया सवारी संकेतमा बत्तीहरू समायोजन गर्दछ। अमेरिका र क्यानडाले निर्मित सवारी साधनहरूमा विभिन्न र colored्गीन संकेतकहरू हुन्छन्, जुन प्राय ब्रेक लाइट बल्बमा एकीकृत हुन्छन्। तिनीहरूसँग फरक र colored्गीन साइड लाइटहरू पनि छन् र नियमित रूपमा साइड साइड इण्डिकेटर वा फोग लाइटहरू हुँदैनन्।
हामी तपाईंको कारलाई युके मापदण्डमा भर्खरको इन-हाउस एलईडी लाइट टेक्नोलोजी प्रयोग गरी रूपान्तरण गर्नेछौं, हामीलाई सबै आवश्यक परिवर्तनहरू पूरा गर्न र तपाईंको कारको स्टाइलिंग कायम राख्न अनुमति दिदै।
क्यानाडाबाट आयात गरिएको सवारीहरू जुन दश बर्ष भन्दा कम उमेरका हुन्छन् त्यसपछि डिभीलाले दर्ता स्वीकृत गर्नु अघि IVA परीक्षण गर्नुपर्नेछ। बेलायतमा एक मात्र कम्पनी हो जुन निजी रूपमा संचालित IVA परीक्षण लेनको साथ यात्री सवारी साधनहरूको लागि, जुन DVSA र आईएसओ प्रमाणित द्वारा अनुमोदित हुन्छ, आयातको यो सुविधा पूरा गर्न लिने समय अन्य सवारी साधन आयातकर्तालाई तपाईंको गाडीको रूपमा प्रयोग गर्नु भन्दा चाँडो हुन्छ। कहिले पनि हाम्रो साइट छोड्ने आवश्यकता पर्दैन र हामी परीक्षण तालिका नियन्त्रण गर्छौं।
आईभीए टेस्ट १० बर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधनहरुको लागी आवश्यक पर्दैन, यद्यपि यो एक एमओटी पास गर्न आवश्यक पर्दछ त्यसैले स signal्केत रोशनी, टायर लगाउने, निलम्बन र ब्रेकको हिसाबले रोडवेट हुनै पर्छ, जुन हामी अवश्य पनि जाँच गर्नेछौं। यूके सडकमा चालित गर्न मिल्छ।
यदि गाडी 40० बर्ष भन्दा बढी पुरानो छ भने यो धेरै छुट छ र यूकेमा सिधा तपाईंको ठेगानामा डेलिभर गर्न सकिन्छ र टाढाबाट दर्ता गर्न सकिन्छ।
कुनै प्रश्नहरू जुन तपाईं क्यानाडाबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको सवारी साधन आयातको बारेमा हुन सक्छ
के हामी तपाईंको कार क्यानाडाबाट निर्यात गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्छौं?
हाम्रा शिपिंग एजेन्टहरूले तपाईंलाई के उद्धरणको लागि अगाडि बढ्नुपर्नेछ भनेर निर्देशन दिनेछ। निर्यात प्रक्रिया देश-देश अनुसार फरक हुन्छ तर छोटो उत्तर हो, हामी मद्दत गर्न सक्दछौं।
निर्यात प्रक्रिया प्रायः धेरै देशहरूमा तुलनात्मक रूपमा हुन्छ तर यो पहिलो नजरमा भ्रमपूर्ण देखिन्छ।
के तपाईं मेरो गाडी स ?्कलन गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईको कारलाई क्यानाडाबाट कहिँ पनि पनि जम्मा गर्नेछौं र हामी यसलाई तपाईको लागि पोर्टमा लग्नेछौं। यो प्रक्रियाको बखत बीमा हुनेछ र एक पटक भाँडामा, यसलाई समुद्री बीमाले ढाक्छ।
युनाइटेड किंगडममा, हामी पनि सवारीसाधनलाई विश्वसनीय सवारी ट्रान्सपोर्टरहरूको नेटवर्क मार्फत सार्न सक्छौं।
क्यानाडाबाट कार पठाउन कति लाग्छ?
यो वर्षको समय, र वर्तमान बजार सर्तमा निर्भर गर्दछ। हामी सँधै तपाईका वाहनलाई युनाइटेड किंगडममा ढुवानी गर्नको लागि उत्तम मूल्यको स्रोतको खोजी गर्नेछौं।
सामान्यतया भन्नुपर्दा, यो भन्दै पठाउँदा भन्दा बढी छ, पूर्वी तटको कारण अधिक दूरी।
क्यानाडाबाट जहाजमा कति समय लाग्छ?
यो गाडी कहाँ छ निर्भर गर्दछ। पश्चिमी तटबाट क्यानाडाबाट ढुवानी गर्न केहि समय लाग्छ ढुवानी लाइनहरूको अभिमुखीकरणको कारण। यो पनामा नहरको माध्यम बाट यात्रा गर्दछ जसको मतलब यसको अर्थ अमेरिकाको सम्पूर्ण पश्चिम तटमा जानु पर्छ।
यदि गाडी भन्न को लागी नजिक छ, न्यू योर्क, यो दुई हप्ता भन्दा कम लाग्न सक्छ। यसबाट पठाइएको बन्दरगाहले जहाज समुद्रमा हुने समयको लम्बाइ निर्णय गर्दछ।
के तपाईं मेरो क्यानाडाली गाडी एम्बर संकेतकहरू इत्यादिको साथ परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ?
क्यानाडाका धेरै जसो सवारी साधनहरू अमेरिकी कार स्पेसमा पर्न थालेपछि तिनीहरूसँग रातो सूचकहरू जस्ता सामान्य चीजहरू हुनेछन्।
हामी तपाइँको गाडी परिमार्जन गर्न को लागी एक प्रकारको सेवा प्रदान गर्दछौं ताकि यो अनुरूप छ।
प्रकाशको सबै पक्षहरू तपाईंको तर्फबाट हेरचाह गरिन्छ ताकि यो कानुनी र ड्राइभ गर्न तयार छ।
के हामी तपाईंको गाडीको सेवा र मर्मत गर्न सक्छौं?
यदि तपाईंको ताजा क्यानाडाली आयातलाई थोरै काम चाहिन्छ भने, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीसँग साइटमा मेकानिकहरूको पूर्ण टोली छ जुन सेवाहरूको विस्तृत दायरामा मद्दत गर्न तयार छ।
प्रकाश रूपान्तरण बाहेक हामी नियमित रूपमा सवारी साधनको पूर्ण पुनर्निर्माण र सामान्य मर्मतसम्भार गर्छौं।
एउटै छानामुनि हुनुको फाइदा भनेको ठूलो मूल्य र सबै समावेशी सेवा हो।
अमेरिकी सवारीसाधनका हाम्रा विज्ञहरूले बुझेका छन् कि तिनीहरू सधैं अरू कुनै कुराभन्दा अलि फरक हुने छन् र हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।
के हामी क्यानाडाबाट क्लासिक सवारी साधनहरूसँग व्यवहार गर्छौं?
वर्षौंको दौडान हामीले क्यानाडाबाट धेरै ग्राहकहरूलाई क्लासिक्सको दायरा आयात गर्न र उनीहरूलाई युनाइटेड किंगडममा आइपुग्दा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पर्न सक्छ वा उनीहरूलाई केवल तपाइँलाई डेलिभरीको आवश्यकता पर्दछ भनेर बुझ्न मद्दत गरेका छौं।
तपाईले जे आयात गर्दै हुनुहुन्छ हामी सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्छौं।
हामी क्यानाडाबाट कति पटक पठाउँछौं?
यो पूर्ण रूपमा हामीले सामान्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका ग्राहकहरूको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
हामी प्राय: तपाईलाई पैसा बचाउनको लागि समूह ढुवानी गर्ने प्रयास गर्छौं। यसरी यो सीधा वा केहि हप्ता हुन सक्छ।
यदि तपाई हतारमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सधैं एकल २० फिट कन्टेनरको विकल्प हुन्छ!